Big Fisher-Price toy recall announced | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » Big Fisher-Price toy recall announced
Big Fisher-Price toy recall announced
Posted by kai on Oct 1, 2010 in Health & Fitness, News |2comments
Baby Gymtastics Play Wall Baby Playzone Crawl Slide Arcade Bat Score Goal Big Fisher-Price Fisher Price
– More than 2.8 million Baby Playzone Crawl & Cruise Playground toys, Baby Playzone Crawl & Slide Arcade toys, Baby Gymtastics Play Wall toys, Ocean Wonders Kick & Crawl Aquarium toys, 1-2-3 Tetherball toys and Bat & Score Goal toys. The valve of the inflatable ball on the toys can come off and poseachoking hazard to children, said CPSC. The agency said there were more than 50 reports of the valves coming off the balls.
– About 100,000 Fisher-Price Little People Wheelies Stand ‘n Play Rampway toys. The wheels on the purple and green cars can come off, posingachoking hazard.
– Most of the products were being recalled in the United States, but about 400,000 of them were sold in Canada.
more .. http://www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml10/10362.html
ယူအက်စ်-ကနေဒါမှာ နေသူများအတွက်… ကလေးရှိသူတွေအတွက်ပါ.။
ကလေးမွေးနေ့အတွက် လက်ဆောင်ဝယ်ပေးထားရင်လည်း ကလေးမိဘကို လှမ်းသတိပေးပေါ့နော..။
အဲဒီအရုပ်ကဟာတွေ ပြုတ်ထွက်ပြီး ကလေးတွေ ပါးစပ်ထဲဝင်.. တစ်ဆို့တတ်လို့ လည်း ဖြစ်ပါတယ်..။
ဆိုင်ကို ပြန်သွားအပ်လိုက်ကြပါလို့..။ ဆက်သွယ်ရမှာက..
Consumer Contact: For additional information, contact Fisher-Price at (800) 432-5437 between9a.m. and6p.m. ET Monday through Friday or visit the firm’s website at www.service.mattel.com
ဖစ်ရှာပရိုက် ဆိုတာက ကလေးကစားအရုပ်တွေထုတ်တဲ့ အင်မတန်ကြီးတဲ့ ကုမ်မဏီကြီးပါ။ အဲဒါမျိုးတွေထုတ်လုပ်တာ တရုတ်ပြည်က များတာမို့မြန်မာပြည်က ကလေးမိဘတွေလည်း သတိထားပေါ့နော.။ တော်ကြာ ရီတန်းတွေ ဖွံ့ ဖြိုးဆံနိုင်ငံတွေ ပို့ ချလိုက်မှ .. မှားဝယ်မိနေမယ်..။ အဲဒီအပေါ်က လင့်မှာ အရုပ်လေးတွေ မျက်စိထဲမြင်အောင် မှတ်ထားကြပေါ့..။
ဟုတ်တယ် အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ် ။ ကလေးတယောက်ပါးစပ်ထဲကောက်ထည့်တာ အာခေါင်မှာနင်နေလို့ ဆေးခန်းတွေပြေးပြီးဗျာများသွားရတဲ့ ကလေးမိခင်နဲ့ ဆုံခဲ့ဖူးတယ် ။
ကစားစရာ အရုပ်မှ မဟုတ်ဘူး.. ကလေး ငယ်ငယ်လေးတွေက သွားပေါက်ခါစ ဆိုတော့ ဘာမဆို ပါးစပ်ထဲ အကုန်ထည့်တယ်.. နှာခေါင်းထဲ ထည့်တယ်.. တချို့ ကလေးတွေက နှာခေါင်းထဲကို ပဲစေ့တွေ ထည့်လို့.. ဆရာဝန်တွေ ဆီမှာ မနဲ ကလော် ထုတ်ခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေလည်း ကြားဘူးတယ်။